Barnaamijka Gaarsiinta Adeegtada Caafimaad ee Sool oo Soo Idlaaday[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Barnaamijka Gaarsiinta Adeegtada Caafimaad ee Sool oo Soo Idlaaday[Sawirro]
Koox dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad iskugu jirtay oo ka tirsan wasaarada caafimaadka Puntland ayaa soo gabogabeeyay hawl ay ka wadeen deegaano ka mida gobolka Sool todobaadkii tagay.
Barnaamijka gaarsiinta adeegyo caafimaad oo dhamaystiran gobolka Sool oo ay wasaarada gacan ka siisey Hay’adda UNFPA ayaa laga fuliyay degmooyinka Tukaraq, Boocame iyo Tuulooyinka Falayrlyale iyo Buuro-wadal.
Hooyada dhaqmaada ah iyo Dhalaanka shanta sanno ka yar ayaa la beegsanayay, waxana iskugu jireen adeegyada caafimaad baaritaano, nafaqayn, Shaybaar, Talaal iyo dawayn iyadoo sidoo kalena loo soo gudbinayay Isbitalka Garowe xaaladaha aan wax looga qaban Karin ee deegaanka.
‘’Tiro farobadan ayaa ka faa’ideysatay talaalka waxana hawshu noogu dhamaatay guul’’ Ayuu yiri Cabdiraxman Cumar Cadde isu-duwaha caafimaadka gobolka Sool oo intaas raacshay barnaamijkan yimid xiligii ku haboona oo ay dadku u baahnaayeen.
Waa markii labaad oo gobolka Sool laga fuliyo Barnaamijka gaarsiinta adeegyada caafimaad ka dib markii lagu guuleystay tijaabada ayaa la filayaa in gobollada kale ee Puntland loo sii gudbiyo.